Wai Wai Nwe – AYA Bank
Author: Wai Wai Nwe
ပေတောခေတ်မီဥစားကြက်ခြံစီမံကိန်း သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနား
Posted on April 30, 2019 May 8, 2019 by Wai Wai Nwe
၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဧပြီလ၃၀ရက်နေ့ အင်္ဂါနေ့နံနက် ဝ၉းဝ၀ နာရီအချိန်တွင်နေပြည်တော်ရှိ M Gallery by Sofitel တွင် ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်မှ အတိုးနှုန်းသက်သာသော နှစ်ရှည်ချေးငွေနှင့် ပံ့ပိုးကူညီ အကောင်ထည်ဖော်ပေးထားသော ပေတောကျေးရွာ ဥစားကြက်ခြံ စီမံကိန်းအားပေတောကျေးရွာရန်ပုံငွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း၊ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်နှင့် Myanmar C.P.Livestock Co.Ltd.တို့အကြား သဘောတူစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းအခမ်းအနားအားကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားသို့ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုနှင့်နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသောင်းထွန်း၊ အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးအောင်နိုင်ဦးစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာနမွေးမြူရေးနှင့် ကုသရေးဦးစီးဌာန မှညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဒေါက်တာရဲထွန်းဝင်း၊ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်မှ အုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာဦးမြင့်ဇော်နှင့်တာဝန်ရှိသူများ၊ Myanmar C.P. Livestock မှPresident Mr.Wirat Wongpornpakdeeနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ပေတောကျေးရွာရန်ပုံငွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်ဆန်းဦးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များတက်ရောက်ကြပါသည်။ ရှေးဦးစွာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှအဖွင့်အမှာစကားပြောကြားပြီး ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်၊ Myanmar C.P. Livestock Co. Ltd. နှင့် ပေတောကျေးရွာရန်ပုံငွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်းမှတာဝန်ရှိသူအသီးသီးတို့မှယခုစာချုပ်ချုပ်ဆိုသည့်အကြောင်းအရာနှင့်ရရှိလာမည့်အကျိုးကျေးဇူးရလာဒ်များအား ရှင်းလင်း[…]
Posted on April 30, 2019 May 6, 2019 by Wai Wai Nwe
ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်နှင့်Myanmar C. P. Livestock Co., Ltd. တို့၏ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့် ပေတောခေတ်မီဥစားကြက်ခြံစီမံကိန်း သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အခမ်းအနား ပေတောကျေးရွာ ဥစားကြက်ခြံ စီမံကိန်း သဘောတူစာချုပ် အောင်မြင်စွာ လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း အထိမ်းအမှတ်အနေဖြင့် ဧရာဝတီဘဏ်၊ ပေတောကျေးရွာရန်ပုံငွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း နှင့် Myanmar C.P. Livestock မှ အုပ်ချုပ်မှုအဖွဲ့ဝင်များသည် ပေတောကျေးရွာ အသင်းဥက္ကဋ္ဌနေအိမ်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ကာ အဖွဲ့လိုက် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံရိုက်ကူးခြင်းနှင့် သဘောတူစာချုပ်များ ဖလှယ်ခြင်းတို့ကို ကျေးရွာနေပြည်သူများ ရှေ့မှောက်တွင် ၂၀၁၉ခုနှစ် ဧပြီလ ၃၀ရက်နေ့၌ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းသည် ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်မှ သက်သာသောအတိုးနှုန်းဖြင့် နှစ်ရှည်ချေးငွေ ပံ့ပိုးကူညီအကောင်ထည်ဖော်ပေးထားခြင်းဖြစ်ပြီးပေတောကျေးရွာ ရန်ပုံငွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအသင်း၊ ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်နှင့်Myanmar C.P. Livestock Co. Ltd. တို့အကြား အောင်မြင်စွာ အကောင်အထည်[…]
Posted on April 10, 2019 May 8, 2019 by Wai Wai Nwe
2020 AFC Women’s Olympic Qualifying Tournament
Posted on April 9, 2019 May 8, 2019 by Wai Wai Nwe
2020 AFC Women’s Olympic Qualifying Tournament တတိယအဆင့်ခြေစစ်ပွဲသို့ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင် အမျိုးသမီးအသင်းကို ဧရာဝတီဘဏ်မှ ဂုဏ်ပြုဆုကြေးငွေကျပ်သိန်း၂၀ဝချီးမြှင့်ခြင်း ပထမဆုံးအကြိမ် 2020 AFC Women’s Olympic Qualifying Tournament တတိယအဆင့်ခြေစစ်ပွဲသို့ တက်ရောက်နိုင်ခဲ့သည့် မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးအသင်းကို ဧရာဝတီဘဏ်မှ ဂုဏ်ပြုဆုကြေးငွေကျပ်သိန်း၂၀ဝချီးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ အဆိုပါဆုကြေးငွေကို ဧရာဝတီဘဏ်အထက်မြန်မာပြည်တာဝန်ခံ Deputy Director ဦးဇော်မျိုးဝေမှ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီးအသင်းကို ပေးအပ်ခဲ့သည်။ ဧရာဝတီဘဏ်အနေဖြင့် ယခုကဲ့သို့ မြန်မာ့လက်ရွေးစင်အမျိုးသမီး အသင်းအောင်မြင်မှုအတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ပါကြောင်းဖော်ပြအပ်ပါသည်။ စိတ်ချယုံကြည် ဧရာဝတီ – Your Trusted Partner
Posted on April 5, 2019 May 8, 2019 by Wai Wai Nwe
ဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်၏ အခြေခံဘဏ်လုပ်ငန်း သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀ဝ)ဆင်းပွဲ အခမ်းအနားဧရာဝတီဘဏ်လီမိတက်၏အခြေခံဘဏ်လုပ်ငန်း သင်တန်းအမှတ်စဉ်(၁၀ဝ)ဆင်းပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ ၅ ရက်နေ့၊ နေ့လည် (၁းဝ၀) နာရီ အချိန်တွင် ဧရာဝတီဘဏ်ရုံးချုပ် (Rowe Conference Room)တွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအခမ်းအနားသို့ ဖိတ်ကြားထားသော ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများ၊ သင်တန်းဆရာ/ ဆရာမများ နှင့် သင်တန်းသား/ သင်တန်းသူ များ တက်ရောက်ခဲ့ ကြပါသည်။ အစီအစဉ်အရ ဧရာဝတီဘဏ် ဥက္ကဌကိုယ်စား ဒုတိယ ဥက္ကဌ ဦးသန်းဇော် မှ သင်တန်းဆင်းပွဲ အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်ဖိတ်ကြားထားသော ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများမှ သင်တန်းသား/သင်တန်းသူများအား သင်တန်းဆင်း အောင်လက်မှတ်များ ပေးအပ်ချီးမြှင့် ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ သင်တန်း[…]